Kaalmo dhaqaale oo la siinayo ururada diiniga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaalmo dhaqaale oo la siinayo ururada diiniga ah
La daabacay tisdag 30 december 2014 kl 10.30
Laga bilaabo sannadka soo socda waxaa muuqata fursad kaalmo dhaqaale oo xagga amniga lagu siin karo ururada diiniga ah. Middan ayaa daba socta ka dib markii sannadahan u dambeeyay weeraro loo geystay goobaha ay ku ciibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudu.
Sidaa waxaa dhayda ka cadeeyay Åke Göransson oo ah xoghaya guud ee guddida hey’adda magaceeda loo soo gaabiyo SST, oo ah hey’add taageero dawladeed u fidisa urur diimeedyada.
-Kaalmadani ma noqon doonto lacag lagu shaqaaleeyo shaqaale, ama waardiye, lakiin waxay noqon doonta lacag tusaale ahaan loogu talo galay in lagu iibiyo daaqado iyo albaabo amnigoodu sugan yahay, seenyaalaha digniinta iyo wixii la mid ah. Sidaas ayuu leeyahay Åke Göransson
Lacagtan hey’addani ay u isticmaali doonto sidii ay wax uga qaban lahayd amniga goobaha lagu cibaadaysto ayaa waxay noqonaysaa qiyaastii saddex milyan oo koroon.
Geesta kale hore ayaa ururada diiniga ah ee yuhuudu ay u heli jireen taageero dhaqaale oo dawladeed oo xagga amniga ah. Middaas oo hore loogu go’aamiyay go’aan dawladeed, ilaa iyo sannadii 2011 lagu dalbaday lacag dhan 6 milyan oo koroon. Hadda ayaa laga yaabaa in kaalmada dhaqaale ee dawliga ah la wada siiyo dhamaan ururada diiniga ah. Balse kaalmada dhaqaale ayaa la siin doona uun ururada diiniga ah ee xag u leh in ay helaan kaalmo dhaqaale oo dawladeed, sida masjidka Eskilstuna iyo Eslöv.